8 Decks BJ Boss: Sei uchitamba Blackjack Pamhepo?
Blackjack ndiwo chete mutambo wekhasino umo zviito zvemutambi zvine mhedzisiro pamikana yake yekukunda, cIwe unoziva mumwe mutambo wekubhejera uko izvi zvinogoneka?
Kunyangwe iwe usiri mutambi ane ruzivo, nekuda kwesoftware nyowani 8 Decks BJ Bhosi unogona kudzikisa pamucheto wemba kubva pa5% kusvika pa0.5%!
Nekuda kweiyi software nyowani iwe uchaona kuti kushandisa iyo chaiyo nzira iri nyore kwazvo.
8 Decks BJ Boss: ndezvei?
Kutamba zvisina kujairika blackjack uchitarisira kurova makumi maviri nesere paruoko rumwe nerumwe hachisi zano rakanaka, asi kazhinji panguva yechikamu chepamhepo iwe unobva wanzwisisa kuti ndiani ari kutamba zvisina kujairika, nekuda kwekuti haashandise zano rekutanga.
Sezvo paine mikana yekuvandudza, usambotanga kutamba usingazive sarudzo (semuenzaniso kurova kana kumira) uine mukana wepamusoro wekuhwina, yeuka kuti kana ukatamba usina kuwana ruzivo urwu, mutengesi anozowana mukana kanokwana zvishanu %, saka mikana yako yekukunda ichadzikiswa zvakanyanya.
Chaizvoizvo mune iyi pfungwa 8 Decks BJ Bhosi inogona kuve mhinduro kwayo, mupfungwa yekuti inowirirana iro rakanakisa rekutanga zano yeiyo Blackjack musiyano ne 8 madheki (nekupararira zvakanyanya pamhepo) kune manejimendi emari iyo mutambi anogona kusarudza kuyedza kuita zvisirizvo zvemutambo, asi nguva dzose nechinangwa, rangarira zvakanaka, kusvika Stopwin iyo inofanirwa kuve yakagadzirirwa zvachose usati watanga chero chikamu chemutambo.
Kunda pamhepo ne 8 Decks BJ Bhosi
Iyi software nyowani yekuhwina pamhepo Blackjack iri nyore kushandisa, ngatiisei seizvi: kana usati wamboshandisa nzira yekubheja zvisati zvaitika, uchishandisa 8 Decks BJ Boss iwe unogona chete kugadzirisa mutambo wako uye pamusoro pese kuwanda kwezvikamu zvako zvekukunda.
Chekutanga pane zvese, ini ndinoonesa izvo nekutarisa chinhu kumusoro kurudyi Gara Pamusoro unogona kunyatso chengeta chirongwa chakakwidziridzwa pahwindo remutambo, sezvaunogona kuonawo muvhidhiyo yekuratidzira pa ►YouTube.
Saka kana imwe yasimbiswa Stopwin usati watanga chikamu, panguva yechinyakare kosi yemutambo ingo tevera iwo iwo mirairo mutafura, yakanyatsogadziriswa kudzikisira imba mukana muiyo online Blackjack musiyano kubva pa5% kusvika ku0,7%. Zvigaro zvisere, uko kwaungave usingazive, kuverenga makadhi kunova kusingabatsiri nekuda kwekupinda kweshangu kwe50% chete.
Iwo mana mutambo kufambira mberi
Sezvauri kuona kurudyi kwechirongwa, unogona kusarudza kushandisa imwe yenzira ina dzemari dzakapihwa, yakagadzirirwa kurwisa nhanho dzemitambo dzakaomesesa, ndipo panotanga mutengesi kuhwina kunyangwe kana mutambi aine makumi maviri, kana tie 4, kesi sezvauchaona zvisingawanzoitika zvachose nhamo.
Kufambira mberi kwakapihwa (kunze kweiyo 2 Chingwa Win akasiyana) zvinopa mukana wekuwedzera mukubheja chete kana mutambi akunda ruoko, uku ndiko kuedza kushandisa zvinovaka pane kupokana nezvisina kunaka.
Mafambiro anotarisirwa ndeaya:
Chingwa Chinokunda 3: ndiyo yechinyakare Chingwa Mukundi, maneuver inonyatso kuzivikanwa kunyanya nevatambi ve roulette, uko muchokwadi inoiswa mumatanho e5, (senge mune inotevera musiyano). Mukuita, iwe unogara uchibheja 1 yuniti, kana ukarasikirwa nemayuniti matatu unoenderera kumberi kubheja mauniti maviri kusvikira wagadzirisa rese kurasikirwa uye kuhwina 3 yuniti, kana iwe uchinge warasikirwa nemamwe mauniti matanhatu (2 x 1 = 6) unoshandura kubheja 2 mauniti uye gara padanho iro padanho kusvikira iyo yakasarudzika isina kukwana yadzorerwa zvizere. Kusiyana neyekare yechishanu-nhanho musiyano (Chingwa Win 3), kushandisa matatu chete mazinga anotendera kukurumidza kupora, kunyangwe matanda anogona kukura nekukurumidza zvakare.
Chingwa Kukunda 5: yechinyakare Bread Winner, iine oparesheni yatotsanangurwa pamusoro.
Vs D'Alembert: sekunyora kwandakaita pamberi pemafambiro aya kuyedza tora mukana wemaitiro akanaka, saka isu tinotamba zvakapesana neyakajairika D'Alembert, saka isu tinowedzera kubheja ne1 yuniti yepfuti yega yega yakakunda nekuderera ne1 unit yeyese pfuti yakarasika. Zviripachena, nguva dzese iwe paunowana 1 yuniti yeyeti kuhwina uye iwe uchinge wadzora iyo yakawandisa, iyo kuverenga inogadziriswazve.
Oscar Gaya: mune dzimwe nzira ndizvo zvandinoda, asi zvinouya pasi pane zvandinofarira. Chinangwa chiri pachena kuhwina 1 yuniti pakurwisa kumwe chete. Kana mushure mekubheja ruoko rwakakundwa nemutambi saka kurwisa kwacho kwapera, kana ruoko rwakarasika unoramba uchitamba nekubheja 1 unit, asi ukangokunda ruoko unowedzera danda ne1 unit, iyo inogara iri chinoramba chiri chimwe chete. Chaizvoizvo kana iwe ukahwina iwe unowedzera kubheja kwako, kana iwe uchirasikirwa iwe unogara uchibheja huwandu hweyuniti kubheja pane yapfuura kupfura. Zviripachena kufambira mberi uku kwakagadzirirwa kuti kusakwidziridze bheji zvakanyanya muzvikamu zvisina kunaka uye chinhu chinonakidza ndechekuti mune chero mamiriro ezvinhu kunyangwe iwe uchifanira kubheja semuenzaniso zvikamu zvishanu, asi bharanzi rekurwisa iri -5, bheji rinoratidzwa 8 Decks BJ Bhosi hazvizove zvikamu zvishanu, asi zvitatu chete, kuitira kuti kana pakahwina kurwisa kwakavharwa +5 yuniti, pasina njodzi yekukwirisa kusagadzikana kwakanyanya uye nekudaro kupora muchiitiko chekuti ruoko rwakakundwa ne kubhangi.
Paunenge uchinge wasarudza manejimendi anonyatsoenderana nemutambo wako wekutamba, ingotinya pane mabhatani kunda o rasika zvichibva pamhedzisiro yeruoko, 8 Decks BJ Bhosi zvinongo ratidza otomatiki huwandu hweyuniti yekuvavarira mupaneru pazasi (Inotevera Bet U).
Ini ndinokuyeuchidza iwe kuti sezvo pasina masvomhu mukana pamusoro peimba, zvakakosha kumisikidza imwe Mazuva ese stopwin semuyenzaniso wezvikamu gumi, izvo kana ukatamba pamatafura e10 euros (kana madhora), zvichiri kureva kuhwina makumi mashanu emadhora pazuva uye kutofungidzira kuti usahwine mazuva ese, pakupera kwemwedzi pamwe tinenge tisiri mune Caribbean, asi kwete kunyange mune yedu yemukati!
File Download	8DBJBoss.zip - 2 MB
Kategori Blackjack Chisungo navigation
Download 4968 Downloads